Ukuphelisa iintloko: Kutheni iifom ze-Intanethi zinceda ukulinganisa i-ROI yakho | Martech Zone
Ukuphelisa iintloko: Kutheni iifom ze-Intanethi zinceda ukulinganisa i-ROI yakho
NgoLwesithathu, Matshi 29, 2017 NgoLwesithathu, Matshi 29, 2017 USteve Hartert
Abatyalomali banokulinganisa i-ROI ngexesha lokwenyani. Bathenga isitokhwe, kwaye ngokujonga kwixabiso lesitokhwe nangawuphi na umzuzu, banokwazi kwangoko ukuba inqanaba le-ROI lilungile okanye alilunganga.
Ukuba kuphela bekulula kubathengisi.
Ukulinganisa i-ROI ngomnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu kwintengiso. Ngapha koko, ngomnye wemisebenzi elucelomngeni esijongana nayo mihla le. Ngayo yonke idatha engena ivela kwimithombo emininzi, kufanele ukuba ibe yinkqubo ethe ngqo. Emva kwayo yonke loo nto, sixelelwe ukuba sinedatha engaphezulu kunangaphambili kwaye sisebenzisa ezona zilungileyo kubahlalutyi izixhobo. Nangona kunjalo, ayinamsebenzi ukuba ufumana idatha eninzi ukuba ayigqibekanga kwaye ayichanekanga.
Ayinamsebenzi ukuba isoftware yakho yohlalutyo inokuba nkulu kangakanani okanye inamandla kangakanani, ilungile njengedatha eyifumanayo. Kulula kakhulu ukwenza izigqibo ezingachanekanga ngokusekwe kwidatha engachanekanga. Kwaye kunokuba ngumceli mngeni ekuchazeni izinto ezithile eziqhuba ukuthengwa. Ngamanye amaxesha, ukulinganisa ngokuchanekileyo indlela yokuziphatha komthengi kunokuziva ngathi uzama ukukhonkxa i-jello eludongeni. Ke unokwenza ntoni ukuze uqiniseke ukuba ufumana idatha elungileyo?
Sebenzisa iifom ze-Intanethi
Iifom ezikwi-Intanethi sisixhobo esinamandla kuba zinokugcwaliswa naphina, kubandakanya ii-smartphones, iitafile okanye iikhompyuter. Ukuba abathengi bakho baya besenza umsebenzi ekuhambeni, nawe kufanele wenze njalo. Amanqanaba aphezulu okwenza ngokwezifiso kunye nokuguquguquka kuthetha ukuba unokwenza iifom ezinceda ukuhambisa iziphumo ozifunayo, ezinje ngokukhokelela kwisiseko, uphando kunye neefom zokwenza ingxelo, kunye nokubhaliswa komsitho. Ukuba ufuna igama kunye nedilesi ye-imeyile kuphela, unokwenza ifom yoqhakamshelwano elula eyenzayo. Ngokukwanjalo, ukuba iimfuno zakho ziqhubele phambili ngakumbi, njengokufaka isicelo sengqesho, ungayenza loo nto, nawe.
I-JotForm ngumakhi wefom ekulula ukusisebenzisa:
Lumka ekusebenziseni iifom ze-boilerplate ezibandakanyiweyo kwiwebhu okanye iinkonzo ze-e-commerce kuba ezi zihlala zibandakanya iinkalo zedatha engafunekiyo, nto leyo ethetha ukuba wenza ulungelelwaniso kwidatha oyiqokelelayo. Njengomdali, uyazi idatha ethile ekufuneka uyenzile ukuze uthathe izigqibo ezibalulekileyo, okuthetha ukuba unokhetho lokwenza ngokwezifiso ifom ukuze ihambelane neekhrayitheriya zakho kubalulekile.
Chaza idatha yakho
Ifom ekwi-Intanethi ikunika izixhobo ezifanelekileyo zokuqokelela ezona datha zibalulekileyo, kwaye uzicele ngendlela ekunceda ngayo. Enye yedatha oyifunayo inyanzelekile, ke kuya kufuneka uchonge iinkalo ezithile njengoko kufuneka ngaphambi kokuba kungeniswe ifom. Oku kukuthintela ekufumaneni ulwazi oluyinxalenye kwaye kufuneka ubandakanyeke kwi-imeyile yasemva nangaphandle kunye nomthengi ukuze ayifumane, ekhokelela kwintengiso elahlekileyo. Umboneleli olungileyo wefom ye-intanethi ukunika eli nqanaba lolawulo.
Ukongeza, unokuqinisekisa ukuba idatha kufuneka ibonelelwe kwifomathi echanekileyo, njengokubandakanya ikhowudi yendawo eneenombolo zefowuni, okanye ukuba idilesi ye-imeyile ine @ sign okanye ibandakanya eyiyo .com, .net okanye .org, njl. . Isizathu sokuba ufune ukwenza oku kukuqinisekisa ukuthembeka kwedatha. Ukuba uvumela abasebenzisi ukuba bathayiphe ngokungazenzisiyo kwidatha yabo, iziphumo zakho zinokungalunganga, kwaye oko koyise injongo yokusebenzisa iifom ezikwi-Intanethi.
Musa ukungcwaba abaThengi ngemibuzo engenamsebenzi
Enye yezona mpazamo zinkulu abantu abanazo ngeefom ezikwi-Intanethi ibonisa yonke intsimi yedatha, enokwenza ukuba ifom ibonakale ngathi inde kakhulu kwaye ingalawuleki. Oku kubangela ukuba iindwendwe ziyishiye ifom yakho ngaphambi kokuba iqale kuba kubonakala ngathi kuthatha ixesha elininzi ukuyigqiba.
Kusebenza ngakumbi ukubandakanya umxholo onemiqathango. Oku kuthetha ukuba ukuba umthengi ubonelela ngempendulo ethile, ivula iseti entsha yamacandelo edatha. Umzekelo, ukuba le fomu ibandakanya umbuzo, onje, Ngaba eli lixesha lakho lokuqala ukuthenga imveliso yethu?, inokuphendulwa ngokuthi "ewe" okanye "hayi". Impendulo ethi ewe inokuvula uthotho lwemibuzo ebuza ukuba umthengi ufunde njani malunga nemveliso yakho, bangayincoma kwaye baphande ixesha elingakanani ngaphambi kokuthenga. Ukuba impendulo nguhayi, ivula iseti eyahlukileyo yemibuzo.
Ukusetyenziswa kwengcinga enemiqathango kuthetha ukuba abathengi baya kubona kuphela kwaye baphendule imibuzo ebhekisa kubo, kwaye kungafuneki beqe uthotho lwemibuzo engenanto. Oku kunyusa amazinga okuphendula kwaye kuphucula ukuchaneka kweempendulo kuba abathengi baziva benyanzelekile ukuba baphendule yonke imibuzo, nokuba iyasebenza kubo okanye akunjalo.
Xa ifom ye-intanethi igqityiwe, idatha inokuhanjiswa kwangoko kwisixhobo sakho sohlalutyo olukhethiweyo, nokuba sispredishithi okanye isoftware yeCRM ephucukileyo. Kuba ulwazi lixesha kunye nomhla onesitampu, unokuluhlalutya ngexesha lokwenyani. Kwaye, kuba icandelo ngalinye ledatha lifakwe ngokwahlukeneyo, unokujonga ulwazi ukusuka kwelona nqanaba lincinci legranular ukuya kwelona nqanaba liphezulu le-macro. Oku kuthetha ukuba unokuhlalutya umkhankaso wakho wentengiso njengoko usenzeka, ngokweenkcukacha ezifanelekileyo, kwaye wenze uhlengahlengiso njengoko luyimfuneko.
Ukuthatha ukuntywila nzulu
Kuba ifom ekwi-Intanethi inokusebenza njengomqokeleli wedatha wangaphambili wokunxibelelana nabathengi, kubandakanya imibuzo yenkxaso kunye nemiyalelo ekwi-Intanethi, unokufunda ngokulula imbali yomthengi nenkampani yakho. Uyazi ukuba umthengi uziyalela kangaphi iimveliso zakho, okanye mangaphi amaxesha ekunxibelelana nenkxaso, kunye nohlobo lwemibuzo ebuziweyo. Isibonelelo sokufaka eli nqanaba ledatha ungalijonga kwakhona ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ujonge iipateni kwaye usombulule iingxaki ezincinci ngaphambi kokuba zibe yintloko enkulu. Umzekelo, unokufumanisa ukuba ngokukhutshwa komgca omtsha wemveliso, ufumana imibuzo emininzi malunga nokuhanjiswa kwamazwe aphesheya, ngenxa yoko unokufuna ukuvuselela ulwazi lwakho lokuhambisa kunye / okanye ulwenze lubaluleke ngakumbi kwiwebhusayithi yakho.
Unokusebenzisa idatha ukufunda iipateni zokuthenga kunye nokuqonda ukuba ngabaphi abathengi abahlala bethenga iimveliso zakho ngosuku lokuqala lokukhutshwa. Oku kunokukhokelela ekwenziweni kweklabhu yabathengi rhoqo kunye nokujonga kwangaphambili kwe-sneak okanye iiwindows zokuthenga kwangoko kubathengi bakho abathembekileyo. Ukukwazi kwintengiso encinci kubathengi bakho akunakuphela, ukuba nje unedatha echanekileyo yokunceda ukuphuhlisa isicwangciso.
Iifom ezikwi-Intanethi zibonelela ngesixa esikhulu samandla kunye nokuguquguquka. Oku kuthetha ukuba unokwenza ngokukhawuleza ifom yokuqokelela idatha elungileyo oyifunayo ukwenza izigqibo zeshishini. Kwaye ungazakha kwaye uzithumele ezi fomu kwimizuzu nje embalwa, oko kuthetha ukuba unokuyihlalutya ngokukhawuleza i-ROI yakho.
tags: ifom yabathengiuhlalutyo lwefomumakhi wefomukugcwaliswa kwefomidatha yefomimihlaba yefomimibuzo yefomiifomuI-JotFormumakhi weefom onlineiifom ezikwi-intanethi
USteve Hartert liGosa eliyiNtloko leNtengiso e I-JotForm, isixhobo esakhayo sokwakha iifom kwi-Intanethi. USteve uneminyaka engaphezu kwama-30 yamava olawulo lokuthengisa kwaye usebenze neenkampani zeFortune 500 kunye neziqalo. Uphethe isidanga seBachelor kwiCalifornia State Polytechnic University, ePomona, kunye neMBA evela kwiYunivesithi yaseCalifornia State, eSan Bernardino.
TeamKeeper: Ukuphucula ukugcinwa kweTalente kunye noLawulo lokuHlola
I-Simplecast: Papasha iiPodcasts zakho ngendlela elula